Xinhua Myanmar - Culture & Entertainment
၂၀၁၅ ပါတီစုံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်များကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ စတင် ကြေညာ
ခုတ်လှဲပြီးသစ်ကို တံဆိပ်ရိုက် ရောင်းချသည့် စနစ်အား ယခုနှစ် သစ်ထုတ် ရာသီမှစ၍ ရပ်နားတော့မည်
စင်္ကြာတောင် ဒေသ ကျောက်ထွင်း လိုဏ်ဂူများအား ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံများ ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေအရ တားမြစ်ချက် ၊ သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ မူဘောင်မူချော ယနေ့ ရေးဆွဲပြီးစီး
ဖားကန့်တွင် စွန့်ပစ်မြေစာပုံ ပြိုကျမှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၉၄ ဦး ရှိလာ
ဖားကန့်တွင် မြေစာပုံပြိုကျ၍ အသက်သေဆုံးမှုများ မဖြစ်စေရန် ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများ ချမှတ်၍ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းဆို
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ကျူးကျော်နေအိမ် ၄၇၈ လုံး ဖယ်ရှားရှင်းလင်း
ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းပိုင်း အမြန်ရထားများတွင် တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ် ရောက်ရှိလာသော စက်ခေါင်း နှင့် တွဲဆိုင်း အသစ်များဖြင့် အစားထိုး စတင် ပြေးဆွဲ
မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားနှစ်ဦးအား သေဒဏ် စီရင်ချက် ချမှတ်ခဲ့သည့် အပေါ် တရားမျှတမှု ရရှိစေရေး နိုင်ငံအနှံ့ ကန့်ကွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ အရှိန်မြင့်တက်လာ
MH 370 ရှာဖွေရန် တရုတ်နိုင်ငံက သြစတြေးလျ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ ထည့်ဝင် မည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန် ကြေညာ
ခရစ္စမတ် လုံခြုံရေးအတွက် အဝါရောင်အဆင့် သတိပေးချက် ပေကျင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ကနဦးထုတ်ပြန်
ခရီးသွားလုပ်ငန်း အေဂျင်စီ ၁၀ ခုအား တရုတ်နိုင်ငံ၌ အမည်ပျက် စာရင်းသွင်း
တရုတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ မိုင်းရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အား တရုတ်-ဗီယက်နမ် နယ်စပ် တစ်လျှောက် စတင် လုပ်ဆောင်
တရုတ်နိုင်ငံ သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း ဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်းနေသည့် နိုင်ငံအနောက်ပိုင်း ၌ တရုတ်ယွမ် ၇၆၉ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်ခဲ့
တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး သွေးကြော အစားထိုးခွဲစိတ်မှု အား စက်ရုပ် အကူအညီဖြင့် အောင်မြင်
တရုတ်နှင့် တောင်ကိုရီးယား (ROK) ပူးပေါင်း၍ စားသုံးသူ အခွင့်အရေးများအား ကာကွယ်သွားမည်
မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ် သံရုံး ပြောရေးဆို ခွင့်ရှိသူ မှ မြန်မာ နိုင်ငံ ၌ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်း ကျဆုံး ခဲ့သည့် တရုတ် နိုင်ငံ မှ စစ်သားများ အရိုးပြာ ရွေ့ပြောင်းခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထား ထုတ်ပြန်
Nov 15 2015
၁၀ ကြိမ်မြောက် G-20 အစည်းအဝေး အား ယနေ့ တူရကီ နိုင်ငံ တွင် စတင်ကျင်းပ ခဲ့ပြီး တရုတ် နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန် တက်ရောက်
Dec 20 2015
မြန်မာ-တရုတ် လူကုန်ကူးမှုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ရေး အဆင့်မြင့်အရာရှိ အစည်းအဝေး ကျင်းပမည်
Dec 04 2015
မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အစိုးရ အထူးသံအမတ် ၊ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး လျိုကျန့်မင် တို့ တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေး
Dec 05 2015
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် တရုတ် နိုင်ငံ အစိုးရ အထူးသံတမန် တို့ မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး အပါအဝင် ကိစ္စများအား ဆွေးနွေး
တရုတ်- မြန်မာ- အိန္ဒိယ သုံးနိုင်ငံ စီးပွားရေး ကုန်သွယ်မှု မြန်ဆန်စေရန် ဆောက်လုပ်လျက် ရှိသည့် တဝမ်း တံတား တည်ဆောက်မှု ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီး
တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်စည်ပြပွဲသည် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကိုထင်ဟပ်
တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ရိုးရာ ချစ်ကြည်ရေး တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေး အကျိုးဆောင်နိုင်ရန် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တကုမာရာဘိဝံသ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ကြွရောက်မည်
တရုတ်နိုင်ငံ မှ ကမကထ ပြုသည့် ခေတ်သစ် ပိုးလမ်းမကြီး သည် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ ကိုပါ အကျိုး ဖြစ်ထွန်းကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ၏ နိုင်ငံရေးအကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင် ဆို
တရုတ်နိုင်ငံက ဧရာဝတီ မြစ်ကြောင်း ရေကြီးရေလျှံမှု ကာကွယ်ရန် အတွက် ယွမ် သန်း ၉၀၀ ကူညီမည်ဟု နိုင်ငံတော် သမ္မတဆို
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်အစအဆုံးကို ကူညီပေးခဲ့ဟု ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဆို
၂၇ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး အား မလေးရှား နိုင်ငံ တွင် စတင်ကျင်းပ
AEC စီမံကိန်း ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းကျော် အကောင်အထည်ဖော်ပြီးစီး ဟု မလေးရှား ဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား
Jan 14 2016
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားဝင်သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့်လုပ်သားများအနေဖြင့် ထိုင်းအေဂျင်စီများအား ဝန်ဆောင်ခအဖြစ် ဘတ် ၁၀,၀၀၀ ကို ပေးစရာမလိုတော့ကြောင်းဆို
မလေးရှားနိုင်ငံ အတွက် ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ခွင့်ပြု ပမာဏအား ယွမ် ၅၀ ဘီလီယံ အထိ တရုတ်နိုင်ငံမှ တိုးမြှင့်
မဲခေါင်စင်္ကြံလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှ လမ်းပိုင်းများအဆင့်မြှင့်တင်ရန် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် မှ ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁ဝဝ ပံ့ပိုးကူညီမည်
လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဒေသတွင်း တရားဝင် သံန္နိဠာန် အာဆီယံ အတည်ပြု
အာဆီယံ စီးပွားရေး အသိုက် အဝန်း အကောက်ခွန် ဖြေလျှော့မှု လုပ်ငန်း များကို ယခုနှစ်ကုန်တွင် ၉၃ ရာခိုင်နှုန်း အထိ လုပ်ဆောင်သွားမည်
အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း တရားဝင် တည်ထောင်လိုက်ကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ပြောကြား
အာဆီယံ ပြည်သူ့ဂုဏ်ပြုဆု မြန်မာနိုင်ငံမှ ရရှိ
တရုတ်-ဂျပန်-တောင်ကိုရီးယား သုံးနိုင်ငံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးပွဲ ဆိုးလ်၌ စတင် ကျင်းပ ဆိုးလ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ပါကစ္စတန်၌ ဈေးဗုံးပေါက်ကွဲမှု သေဆုံးသူ ၂၄ ဦးအထိရှိလာ
မဲခေါင်မြစ် အထက်ပိုင်း ကုန်သွယ် ရေကြောင်း သွားလာရေး အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက မြစ်ဝှမ်းဒေသရှိ လေးနိုင်ငံ အကြား ကုန်စည်နှင့် ခရီးသည် သယ်ယူ ပို့ဆောင်မှုတို့ အတွက် အထောက်အကူ ပြုနိုင်မည်
၂၀၁၅ ခုနှစ်၏ ထင်ရှားသော နိုင်ငံတကာ ဖြစ်ရပ်များမှ ကောက်နှုတ်ချက်များ
Dec 26 2015
၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း အကောင်းဆုံး ဘောလုံး ကစားသမား ၁၀ ဦး စာရင်းတွင် မက်ဆီ ဦးဆောင်
BRICS ဘဏ်နှင့် AIIB တို့ လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှု စတင်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော လမ်းကြောင်း ပေါ်ရောက်ရှိဟု တာဝန်ရှိသူ ပြောကြား
BRICS မီဒီယာ ခေါင်းဆောင်များ၏ ထိပ်သီး အစည်းအဝေး ပထမဆုံး အကြိမ် ကျင်းပ
IS အကြမ်းဖက် တပ်ဖွဲ့များအား တိုက်ခိုက်ရန် ဂျာမနီ နိုင်ငံက မာလီ နိုင်ငံသို့ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စေလွှတ်မည်
Dec 30 2015
Kamov ရဟတ်ယာဉ်များ ရုရှားက အိန္ဒိယတွင် ထုတ်လုပ်မည်
တစ်ဒေါ်လာ ၁၃၀၅ ကျပ်အထိ ဒေါ်လာဈေးတက်
မသန့်ရှင်းသော စားသုံးဆီများကို စားအုန်းဆီနှင့် ရောနှော ရောင်းချမှုကို ထိရောက်စွာ အရေးယူမည်
မွန်ပြည်နယ်တွင် ဘုရားဖူး ခရီးစဉ် နှင့် ကမ်းခြေ ခရီးစဉ်သစ်များ ဖော်ထုတ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မီးပုံးပျံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆.၄၃ သန်းအထိ တိုးတက်ရရှိ
Oct 27 2015
“ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမကြီး” စီမံကိန်း မှ ကမ္ဘာ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် အခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွင်း လုပ်ငန်း စီမံကိန်း ၈၄ ခု သတ်မှတ်ချိန် အတွင်း ပြီးစီးအောင် မဆောင်ရွက် နိုင်ကြောင်း တွေ့ ရှိရ ဟုဆို
၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမခုနှစ်လ အတွင်း ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂,၁၉၂ . ၆၅၉ သန်းပြ
၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာရေး ရသုံး မှန်းခြေတွင် ကျပ် ၂ .၇၄ ထရီလီယံ လိုငွေပြ
Jan 08 2016
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ဘီလီယံအထိရရှိရန် မျှော်မှန်းထား
ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြင့် ယာယီအုပ်ချုပ်သွားမည် ကြေညာ
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေမြောက်ပိုင်း ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ဖုန်ကြားရှင် ဦးဆောင်သော ကိုးကန့်တိမ်းရှောင်အဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်နေ၍ အဆိုပါ ဒေသကို အရေးပေါ်အခြေအနေ ထုတ်ပြန်ပြီး စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့က နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မှ အမိန့်ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်သည်။ (Xinhua)
ရှန်ဟိုင်း ဒစ္စနေအပန်းဖြေစခန်း (Disney Resort) အား ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်မည်
ရှန်ဟိုင်း၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရှန်ဟိုင်း ဒစ္စနေအပန်းဖြေစခန်း (Disney Resort) အား ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံး လာရောက် လည်ပတ်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်း Walt Disney Company နှင့် Shanghai Shendi Group က ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ၌ ဟာပင် ရေခဲနှင့် နှင်းဥယျာဉ် ပွဲတော် စတင်
ဟာပင်၊ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ဟေလုံကျန်း (Heilongjiang) ပြည်နယ် ၏ မြို့တော် ဟာပင် (Harbin) ၌ ရေခဲနှင့် နှင်းဥယျာဉ် ပွဲတော် အား ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့က စတင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ပွဲတော်တွင် ရေကူးခြင်းများ၊ အကအခုန် များ၊ ရေခဲဖြင့် ပုံဖော် ထုဆစ် ထားသော ခမ်းနား ထည်ဝါသည့် ရဲတိုက်များ နှင့် နန်းတော်များ ပါဝင် ပြသထားမည် ဖြစ်ကာ လာရောက် ကြည့်ရှုသူ တစ်သန်းကျော် ရှိလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း၌ နှစ်ပေါင်း၂၆၀၀သက်တမ်းရှိ သင်္ချိုင်းဂူများ တူးဖော်တွေ့ရှိ
ကျန့်ကျိုး၊ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟဲနန်ပြည်နယ် ၌ နွေဦး နှင့် ဆောင်းဦး ကာလ များဖြစ်သည့် (၇၇၁-၄၇၆ဘီစီ) မှ သင်္ချိုင်းဂူ များအား အုပ်စုလိုက် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ရှေးဟောင်း သုတေသန ပညာရှင်များက ဒီဇင်ဘာလ ၆ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းတွင် မင် မင်းဆက်၏ ရှားပါးလှသော ဂူသင်္ချိုင်းအား နံရံဆေးရေး ပန်းချီများနှင့် အတူ တူးဖော်တွေ့ရှိ
ကျိနန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရှေးဟောင်း သုတေသန ပညာရှင်များသည် တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဒေါင်း ပြည်နယ်တွင် နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ခန့် ကာလက ဂူသင်္ချိုင်းအား ရှားပါးလှသည့် ဆေးရောင်စုံ နံရံဆေးရေးပန်းချီ များ နှင့် အတူ တူးဖော် တွေ့ရှိရကြောင်း သိရသည်။
လာမည့် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် မြန်မာ ရုပ်ရှင်များကို ရုံပြိုင် စနစ်ဖြင့် ပြသသွားမည်
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်မှ စတင်ကာ မြန်မာ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားများ ကို အေအုပ်စု၊ ဘီအုပ်စု ခွဲကာ ရုံပြိုင် စနစ်ဖြင့် ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
တရုတ်နှင့် ဗြိတိန် ပြည်သူလူထု အချင်းချင်း ယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်မှုများက အပြန်အလှန် အကျိုးပြုကြောင်း သမ္မတ ရှီ ပြောကြား
လန်ဒန်၊ အောက်တ်ိုဘာ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နှင့် ဗြိတိန် နှစ်နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှုများ၏ အနှစ်သာရများကို ပြည်သူ အချင်းချင်း ဖလှယ်မှုများ မှတဆင့် နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူများ၏ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်၊ နေထိုင်ဟန်များတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သည့်အပြန်အလှန် အကျိုးပြုမှုများကို ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟု အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ ကွန်ဖြူးရှပ် သင်တန်းကျောင်း နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး အဖွင့်မိန့် ခွန်း၌ တရုတ် သမ္မတရှီက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ် ပန်းချီ၊ ပန်းပုပညာရှင် ဟန်မိုင်းလင် အား ငြိမ်းချမ်းရေး အနုပညာရှင် အဖြစ် ယူနက်စကို သတ်မှတ်
ပါရီ၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ် ပန်းချီ၊ ပန်းပု နှင့် ဒီဇိုင်းပညာရှင် ဟန်မိုင်းလင်အား ယူနက်စကို ငြိမ်းချမ်းရေး အနုပညာရှင် အဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း ယူနက်စကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဘိုကိုဗာ က အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက် တွင် ကြေညာ ခဲ့သည်။
Jan 20 2016
ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စွမ်းအင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး တရုတ် နို်င်ငံနှင့် အာရပ် ပင်လယ်ကွေ့ နိုင်ငံများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ အကြီးအကဲနှင့် တရုတ် နိုင်ငံ သမ္မတ ဆွေးနွေး
တရုတ်နှင့် ဆော်ဒီ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး မြှင့်တင်၍ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပိုမို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အာရုံစိုက်မည်
တရုတ် နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်၏ ဗြိတိန် နိုင်ငံ လည်ပတ်ရေး ခရီးတွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆၀ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိ စာချုပ်နှင့် သဘောတူညီမှု စသည့် အောင်မြင်မှု များစွာရရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ရှိ မျိုးနွယ်စု ဒေသ အားလုံး ဒီဇင်ဘာလအကုန်တွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိမည်
တရုတ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဝမ်ရိ ၏ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံ လည်ပတ်ရေး ခရီးစဉ် ပြီးဆုံး ခဲ့ပြီး အောင်မြင်ပြည့်စုံသော လည်ပတ်ရေး ခရီးစဉ် ဖြစ်ခဲ့
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဆင်စွယ်ပစ္စည်းမှောင်ခိုသွင်းသူ ရုရှားအမျိုးသား တစ်ဦးအား ဖမ်းဆီး
Jan 28 2016
တရုတ်နိုင်ငံ ဒုတိယ သမ္မတ နှင့် ဗြိတိန် လွှတ်တော်အမတ် တွေ့ဆုံ
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ်းလွန် နျူကလီးယား ဓါတ်ပေါင်းဖို တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်
လေထု သန့်စင်ရေးအတွက် ယွမ် ၁၆.၅ ဘီလီယံ တရုတ် သုံးစွဲမည်
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကိုယ်ပိုင်ကား ပိုင်ဆိုင်သူ ၁၇၂ သန်းရှိလာ
Copyright © 2018 Xinhua Myanmar. All Rights Reserved.